मत्ती ९ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
९ त्यसपछि डुङ्गा चढेर उहाँ पारि तर्नुभयो र आफ्नो सहर* जानुभयो। २ अनि हेर, मानिसहरूले पक्षाघात भएको एक जना मानिसलाई खाटमा राखेर उहाँकहाँ ल्याउँदै थिए। तिनीहरूको विश्वास देखेर येशूले पक्षाघात भएको त्यस मानिसलाई भन्नुभयो: “हरेस नखाऊ बाबु, तिम्रो पाप क्षमा भयो।” ३ अनि हेर, कोही-कोही शास्त्रीहरूले मनमनै यसो भने: “यसले त परमेश्वरको निन्दा गर्दैछ।” ४ तिनीहरू के सोच्दैछन्‌ भन्ने थाह पाएर येशूले यसो भन्नुभयो: “तिमीहरू किन आफ्नो मनमा यस्तो दुष्ट कुरा सोच्दैछौ? ५ वास्तवमा, के भन्न सजिलो छ, ‘तिम्रो पाप क्षमा भयो’ भन्न कि ‘उठेर जाऊ’ भन्न? ६ तैपनि मानिसको छोरासित पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अख्तियार छ भन्ने तिमीहरूले बुझ . . .।” त्यसपछि उहाँले पक्षाघात भएको त्यस मानिसलाई भन्नुभयो: “उठ, तिम्रो खाट बोक अनि आफ्नो घर जाऊ।” ७ अनि ऊ उठ्यो र आफ्नो घरतिर लाग्यो। ८ यो देखेर भीडमा डर छायो र मानिसलाई यस्तो अख्तियार दिनुहुने परमेश्वरको तिनीहरूले महिमा गरे। ९ त्यसपछि, त्यहाँबाट जाँदै गर्दा येशूले मत्ती नाम गरेको एक जना मानिसलाई कर उठाउने ठाउँमा बसिरहेको देख्नुभयो र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो: “मेरो पछि लाग।” तब तिनी जुरुक्क उठेर उहाँको पछि लागे। १० केही समयपछि, उहाँ मत्तीको घरमा खान बस्नुहुँदा हेर, कर उठाउने र पापी मानिसहरू धेरै आए अनि येशू र उहाँका चेलाहरूसित सँगै बसेर खान थाले। ११ यो देखेर फरिसीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई यसो भन्न थाले: “तिमीहरूका गुरु किन कर उठाउने र पापी मानिसहरूसित बसेर खान्छन्‌?” १२ तिनीहरूको कुरा सुनेर उहाँले भन्नुभयो: “निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्छ। १३ त्यसैले जाओ र यसको अर्थ के हो, सिक: ‘म बलिदान होइन, कृपा चाहन्छु।’ किनकि म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएँ।” १४ त्यसपछि यूहन्नाका चेलाहरू उहाँकहाँ आएर सोधे: “हामी र फरिसीहरू उपवास बस्ने गर्छौं तर तपाईंका चेलाहरूचाहिं किन उपवास बसदैनन्‌?” १५ तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “दुलहा आफूसँग होउन्जेल के तिनका साथीहरूले शोक मनाउँछन्‌ र? तर यस्तो बेला आउनेछ, जब दुलहालाई तिनीहरूबाट अलग पारिनेछ र त्यसपछि तिनीहरू उपवास बस्नेछन्‌। १६ कसैले पनि पुरानो लुगामा नयाँ टालो सिलाउँदैन; नत्रता नयाँ टालो सुकेर जाँदा त्यसले पुरानो लुगालाई तानेर झनै फटाउनेछ। १७ न त मानिसहरूले नयाँ दाखमद्य* पुरानो मशकमा * नै राख्छन्‌। यदि तिनीहरूले त्यसो गरे भने मशक च्यातिन्छ र दाखमद्य पोखिन्छ अनि मशक पनि कामै नलाग्ने हुन्छ। तर मानिसहरूले नयाँ दाखमद्य नयाँ मशकमै राख्छन्‌ र ती दुवै जोगिन्छ।” १८ उहाँले तिनीहरूलाई यी कुरा भनिरहनुभएको बेला हेर, उहाँलाई भेट्न आएको एक जना शासकले* दण्डवत्‌ गर्दै यसो भने: “यतिन्जेलसम्म त मेरी छोरी मरिसकेकी हुनुपर्छ तर तपाईं आएर ऊमाथि आफ्नो हात राखिदिनुहोस् र ऊ जिउँदो हुनेछे।” १९ त्यसपछि येशू उठेर तिनको पछि लाग्नुभयो र उहाँका चेलाहरू पनि सँगसँगै गए। २० अनि हेर, रगत बग्ने व्यथाले गर्दा दुःख पाएको बाह्र वर्ष भइसकेको एक जना स्त्री आएर पछाडिबाट उहाँको लुगाको किनारा छोई। २१ किनकि उसले मनमनै यस्तो सोचेकी थिई: “यदि मैले उहाँको लुगा छोएँ मात्र भने पनि म निको हुनेछु।” २२ येशू फनक्क फर्किनुभयो र उसलाई देखेपछि यसो भन्नुभयो: “हरेस नखाऊ नानी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ।” अनि उत्तिखेरै त्यो स्त्री निको भई। २३ अनि जब उहाँ ती शासकको घरमा पुग्नुभयो तब उहाँले शोकधुन बजाइरहेका बाँसुरीवादकहरू र मानिसहरूको भीडले गर्दा खैलाबैला मच्चिरहेको देख्नुभयो। २४ अनि येशूले यसो भन्न थाल्नुभयो: “यहाँबाट गइहाल किनकि सानी ठिटी मरेकी छैन तर निदाइरहेकी छे।” यो सुनेर तिनीहरू उहाँको खिल्ली उडाउँदै हाँस्न थाले। २५ भीडलाई बाहिर पठाउने बित्तिकै उहाँ भित्र पस्नुभयो र सानी ठिटीको हात समात्नुभयो अनि तिनी जुरुक्क उठिन्‌। २६ तब त्यस इलाकाको चारैतिर यस विषयमा चर्चा चल्यो। २७ येशू त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा दुई जना अन्धा यसो भनेर पुकार्दै उहाँको पछि-पछि लागे: “हे दाऊदका छोरा, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्।” २८ उहाँ घरभित्र पस्नुभएपछि ती अन्धाहरू उहाँकहाँ आए अनि येशूले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “मैले तिमीहरूको आँखा खोलिदिनसक्छु भनेर के तिमीहरू विश्वास गर्छौ?” तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए: “गर्छौं, प्रभु।” २९ त्यसपछि उहाँले तिनीहरूको आँखा छुँदै भन्नुभयो: “तिमीहरूले विश्वास गरेअनुसारै तिमीहरूलाई होस्।” ३० अनि तिनीहरूको आँखा खुल्यो। साथै, येशूले तिनीहरूलाई यस्तो कडा चेतावनी दिनुभयो: “यो कुरा कसैले थाह नपाओस्।” ३१ तर त्यहाँबाट बाहिर निस्केपछि तिनीहरूले त्यस इलाकाको चारैतिर उहाँको विषयमा बताइदिए। ३२ ती मानिसहरू जाँदै गर्दा हेर, दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको एक जना गुँगोलाई मानिसहरूले उहाँकहाँ ल्याए। ३३ अनि उहाँले दुष्ट स्वर्गदूतलाई धपाउनुभएपछि त्यो गुँगो बोल्न थाल्यो। यो देखेर तीनछक पर्दै भीडले भन्यो: “इस्राएलमा कहिल्यै यस्तो देखिएको थिएन।” ३४ तर फरिसीहरूले यसो भन्न थाले: “दुष्ट स्वर्गदूतहरूको शासकबाट शक्ति पाएको भएर त त्यसले दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाउँछ।” ३५ अनि सारा सहर र गाउँहरू घुम्दै येशूले तिनीहरूको सभाघरमा सिकाउनुभयो र राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। साथै, हर प्रकारका रोगबिमार पनि निको पार्नुभयो। ३६ भीडलाई देखेर उहाँ टिठाउनुभयो किनभने तिनीहरू छाला काढिएका अनि गोठालो नभएर तितरबितर भएका भेडाहरूजस्ता थिए। ३७ त्यसपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “साँच्चै, फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू भने थोरै छन्‌। ३८ त्यसकारण, फसलका मालिकलाई आफ्नो बाली काट्न खेतालाहरू पठाइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर।”
^ मत्ती ९:१ * अर्थात्‌, “कफर्नहुम।”
^ मत्ती ९:१७ * वा, “अङ्गुरबाट बनेको मद्य।”
^ मत्ती ९:१७ * जनावरको छालाबाट बनेको थैलो।
^ मत्ती ९:१८ * अर्थात्‌, “यहूदी सभाघरका अध्यक्षले।”